ဟေတီ Burn! ပြန်ကြားရေးအခုဖြစ်ပျက်နှင့်အတိတ်6နှင့်7ဇူလိုင်လကျော်သောလေးနက်သောဖြစ်ရပ်များကိုပိုက်ဘက်
စတင်ပြုလုပ်ခြင်းMundoဟေတီ Burn! ပြန်ကြားရေးအခုဖြစ်ပျက်နှင့်အတိတ်6နှင့်7ဇူလိုင်လကျော်သောလေးနက်သောဖြစ်ရပ်များကိုပိုက်ဘက်
8 ဇူလိုင်လ 2018 Belz Mundo 64
"ရဲဘော်, ငါသည်အရှိအခြေအနေကြောင့် succinctly သူတို့ကိုပြောပြ ဟေတီ နေဆဲအလွန်လေးနက်သောလမ်းများ၏အကျပ်အတည်းနက်ရှိုင်းသည်ဟုပြည်နယ်ဆူပွက်။ တချို့ကရက်အကြာပုန်ကန်တစ်ပြည်နယ်တိုင်းပြည်အားလုံးနီးပါးဒေသများတွင်တည်ရှိ။ အဆိုပါလမ်းကြောင်းအဖြတ်နေကြတယ်, မီး, အတားအဆီးတွေနဲ့ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများအတွက်အကြမ်းမဖက်တိုက်ပွဲလည်းမရှိ။ ဤအခြေအနေသည်လက်ရှိတရားမဝင်သမ္မတ၏ရုပ်သေးအစိုးရဆောင်ရွက်နေ anti-လူကြိုက်များမူဝါဒများနှင့်လုယက်မှုဆန့်ကျင်, နှစ်ပေါင်းများစွာပဋိပက္ခတွေ, မကျေနပ်မှုများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ကြောင်းအမျိုးမျိုးတိုက်ပွဲများတစ်ခုစုဆောင်းခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည် Jovenel မော.
နောက်ဆုံးပေါ်ခလုတ်လောင်စာဆီစျေးနှုန်းများတစ်ဦးရက်စက်စွာတိုး၏အစိုးရရဲ့ကြေညာချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ (အဘယ်သူမျှမဓါတ်ငွေ့ထောက်ပံ့ရေးစရာရှိသောကြောင့်ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး, ချက်ပြုတ်ဘို့, လူများအသုံးပြုတဲ့အဓိကလောင်စာအထက်အတန်းများနှင့်အာဏာရရေပေါ်ဆီ မှလွဲ. , မီးလောင်လွယ်ကျောက်မီးသွေးနှင့်ရေနံဆီဖြစ်ပါသည်) ။ ဒီအတိုးယခင်ကကြေညာခဲ့သည်ခဲ့ကြောင်းနှင့်လူကြိုက်များသည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်လျှင်တစ်ဦးလူထုအုံကြွမှုတိုက်ဖျက်မည်မယ်လို့သတိပေးခဲ့။ ဤသည်ဟေတီအတွက်အခုအချိန်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုပါပဲ။
ပဋိပက္ခ၏လက်ရှိပြည်နယ်ဖိနှိပ်တပ်ဖွဲ့များကထိန်းချုပ်ရေး outgrown သိရသည်။ ဖြစ်ပွားများ၏ပြင်းအားအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်အဲဒီမှာ Duvalier အာဏာရှင်စနစ်၏ကျဆုံးခြင်းသည်ဤလက္ခဏာများတစ်ခုလူထုအုံကြွမှုခဲ့သညျ။
အဆိုပါအမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့ကြေညာချက်မှတဆင့် quartered နှင့်အကြောင်းကြားသည်။ ဤ "ရှားပါး" ဆုံးဖြတ်ချက်ကသမ္မတ Jovenel ဖိနှိပ်မှု၎င်း၏အဓိကအင်အားစုကျော်မျှမထိန်းချုပ်ရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ လမ်းများပေါ်တွင်ရဲတပ်ဖွဲ့ MINUJUSTH (ကုလသမဂ္ဂ) ၏အဘယ်သူမျှမရှိနေခြင်းသည်လည်းရှိပါသည်။ ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိအစိုးရကမည်သည့်အရာရှိတဦးကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်မထားပါဘူး။
နားလည်ရန်သော့ချက်ဒြပ်စင်ထု၏ပုန်ကန်၏ပြည်နယ်လုံးဝမြင့်တက်လောင်စာဆီစျေးနှုန်းများ၏တကယ်တော့ကျော်လွန်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဤသည်ကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေအဖြစ်, "ဖန်ခွက်ကိုဖဲ့ကြောင်းနောက်ဆုံးတစ်စက်" ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြော်ငြာ nauseam နှင့်လူကြိုက်များဆူညံသည့်အတားအဆီးတွေပေါ်နှင့်အပြည့်အဝအတွင်းအစိုးရ၏ဖြုတ်ချဘို့နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၏နှုတ်ထွက်စာကိုတောင်းဆိုနေတာလမ်းမများပေါ်တွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
ရာနှင့်ချီသောဆန္ဒပြသူများထောင်ပေါင်းများစွာ၏၏စသည်တို့ကိုဘူတာ, မော်တော်ကားအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဒေသခံ, အိုးအိမ်, မီးရှို့အတားအဆီးတွေကိုတက် setting, လမ်းများမှတဆင့်ပြောင်းရွှေ့ ထိုသို့ရှိရာအစိုးရနန်းတော်မြို့တော်၏ဗဟိုသိမ်းပိုက်ဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အဘယ်သူမျှမနည်းလမ်းများ, ရှိသမျှစျေးကွက်, မီဒီယာပိတ်ထားကြသည် (ရေဒီယို, တီဗီချန်နယ်လ်, etc) အချို့ကိစ္စများတွင်သတင်းအချက်အလက်များ၏ပျက်ကွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်သတင်းထောက်တွေ, ၎င်းတို့၏ထုတ်လုပ်မှုစင်တာများမှသွားလာနိုင်ခြင်းကြောင့်သူတို့ကသတင်းအချက်အလက်ထုတ်ပေးကြသည်မဟုတ်။ သို့သော်လူကြိုက်များမီဒီယာ communicators တစ်နည်းနည်းနဲ့သတင်းအချက်အလက်များကွင်းဆက်အတူတကွ piece ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။
အရေးကြီးတာက, ယခုအချိန်တွင်အဘို့မရှိ, နိုင်ငံရေးအင်အားစု action ကိုပညတ်ထား၏, သို့သော်တခု uncoordinated ထုံးစံအဖွဲ့အစည်းများအတွက်တီထွင်လျက်ရှိသည်တစ်ဦးထွန်းလင်းကနိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်၏ဤရုတ်သိမ်းပေးတို့အကြားနှင့်အခြေအနေကအကြမ်းဖက်မှုများအတွက်အဆုံးသတ်တားဆီးဖို့ကြိုးစားနေကြတယ် အမှတ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပါကျယ်ပြန့်။
မြို့တော် Toussaint Louverture လေဆိပ်၎င်း၏စစ်ဆင်ရေး၏ပိတ်သိမ်းကြေညာခဲ့သည်နှင့်အကြမ်းဖက်မှုများ၏လုပ်ရပ်များသည်နိုင်ငံ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုအစီရင်ခံခဲ့သည်။
လောင်စာဆီစျေးနှုန်းတွေထဲမှာတိုးနိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (IMF) နဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ညှိနှိုင်းမှုအစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဟာအီတီအစိုးရကယူအစီအမံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့လုံထိန်းများစွာချထားလိုက်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အခြေအနေကထိန်းချုပ်မှုထဲကနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးအောက်ပိုင်းသေနေသောကြာနေ့ကမြို့တော်ဒေသများရှိသူတို့က, အလိုအလျှောက်လက်နက်ပြီးတော့ Activision နေတာငါကြား၏။
မှတ်ချက် solitariosinvisibles.org :
ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးအစိုးရများကြောင်းထပ်တလဲလဲကြေညာ ဟေတီ y ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ သူတို့ကကျွန်းတစ်ပြည့်စုံပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောဆက်ဆံရေးခိုင်မာစေရန်နှစ်ဖက်စလုံးကရေတိုရေရှည်လက်ခံမှုသေချာလို့အကျိုးမဲ့အစွန်းရောက်ဖယ်ရှားပစ်ရန်အစီအစဉ်ရတဲ့အပေါ်လုပ်ဆောင်နေခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့အစဉ်အဆက်ကစီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားထို့နောက်ကိုင်ယူသော quelled ခံရဖို့အကူးအပြောင်းအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးနှစ်ခုစလုံးအကျင့်ပျက်အုပ်စုများ၏ soldiery နှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများပါဝင်နိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှသွေးထွက်သံယိုများ၏ကြေငြာချက်နှင့်အတူရောနှောသောကွောငျ့ဖွစျသညျဟုသံသယရှိသူရှိသည်ဟုထက် ဖြစ်နိုင်လျှင်ပျက်စီးခြင်းကိုနှင့်အာဏာများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ကြသူဂိမ်းလုပ်မကုမ္ပဏီတစ်ခုကယုံကြည်ချက်ခြင်းမရှိဘဲ, ထိခိုက်သေဆုံးမှုမပါဘဲ, နားလည်ရန်ပြစ်တင်ရှုတ်ချကြသူလူအခြို့ပါ။
Catalonia များအတွက် Pedro Sanchez စီမံကိန်းနှင့်ပါဝါနေ
8 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 18: 22
ကြောင်းအတားအဆီး, ဒီမှာအဘယ်သူမျှမ llegye ကျော်လွန်
8 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 19: 29
8 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 20: 48
အခုခြေဆွံ့သောသူကို၎င်းတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအန္တရာယ်မထားချင်ကြဘူးတဲ့သူတွေကို swarthy နှင့် RD လုပ်ငန်းရှင်များကိုကြောက်ခဲ့တာမှန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဝယ်နေကြခြင်းနှင့်အတူတူပင် danile ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဘာမျှမပြောပါ။
8 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 23: 07
ဒါကြောင့်ငါသည်ဤ asarozo Aki အလွဲသုံးစားမှုနှင့်အတူဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဤတိုင်းပြည်နှင့်အတူရှိ
9 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 00: 29
နိုင်ငံတော်သမ္မတဒန်နီလိုဋ empatalone နှင့် nosotro စစ်ရေး pa ဋ toke ရှေ့တော်၌ထိုနယ်နိမိတ်ပေးပို့
9 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 00: 48
9 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 10: 36
သင်, ရှေ့တော်၌, Jackass လူထုံရှို့သွားကြသည်!
10 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 12: 03
Edris Sito စိန့် Amand ဂျူနီယာသို့သော်သူတို့လုပ်နေလုပ်နေအဘယ်အရာကိုပါပဲ။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ကြမ်းကြုတ်ထဲမှာခဲသွေးထွက်။ ဒါကြောင့်သင်လည်းပါကဝတ်ဆင်။ ဆိုးယုတ်သောအမှုကိုစောင့်ဘယ်ကြောင့်ကြံဖြစ်ပါသည်
10 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 13: 53
9 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 03: 15
ကျနော်တို့အစိုးရမှပြုပါနှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှု, ဒါကြောင့်အစိုးရနဲ့အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနေ့တိုင်းပိုပြီးပါဝါ cojiendo ဖြစ်ပါတယ်ပါဘူး
9 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 09: 49
9 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 11: 48
ကံမကောင်းစွာပဲအစိုးရကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူသားထုအဖြစ်ကောင်းစွာအစိုးရများအဖြစ်အရင်းအမြစ်ကိုသွားခဲ့ရပြီးသူတို့ကနားလည်, ဘယ်တော့မှနှင့် Huerga နှင့် Eraser ကိုဖန်ဆင်းပေမယ့်ဟေတီအတွက်သူမြင့်တက်လောင်စာလျှော့ချမဟုတ်ခဲ့လျှင်, ကံမကောင်းရိုက်ထည့်ရန် သူ Huerga ဖြစ်ထို့နောက်ရောဂါနှင့်ဌာနချုပ်စေရန်မျှော်မှန်း
10 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 00: 55
မဟုတ်အချက်အလက်များသို့မဟုတ် Eraser, သင်မူကားအစိုးရ Huerga ENCONTRA မှသွားလျှင်မအိမ်ခြံမြေပိုင်ရှင်, ဒါပေမဲ့သူတို့သောခြေဆွံ့သောသူကိုသိသောကြောင့်ဝင်ပြောနေ .. အရူးညှဉ်းဆဲဘယ်တော့မှမ
10 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 12: 12
အဘယ်သူမျှမသပိတ်မှောက်ရဲ့ Francisco က Vasquez Polanco RD ။ ရုံ vandalize ဖို့ကလုပ်ပါ။ ထိုအဖျက်ဆီးနှင့်။ သူတို့ကမှားခဲ့ကြပါလျှင်ယခုသူတို့ပိုဆိုးပါလိမ့်မည်။ ထိုအခါကအဓိပ္ပာယ်လုပ်မထားဘူး။ ထို့ကြောင့်သူတို့ vandalisando နှင့်ခိုးယူမဟုတ်လျှင်ဟုဆိုကာကြသည်မဟုတ်။ စည်းကမ်းသည်အခြားနည်းလမ်းများရှိပါသည်။ ထိုအခါဂြိုလ်သားလေးစား။ သူတို့သည်အစဉ်ကိုသိ Little ကအရာ။ ဤလူမျိုးသည်သြတ္တပ္ပစိတ်ကိုရောင်းချကွဲပြားခြားနားထင်နှင့်မရမယ်အရာဖြစ်တယ်။ ထိုအအဝိဇ္ဇာကြကုန်အံ့။ ထိုအသူ့ဟာသူသူမ၏အသံနေ့၌ခံစားခဲ့ရပါစေ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လမ်းမရှိသောဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်သင် 10 200 ပြန်ခြေလှမ်းပေးရဝင်ငွေ။ ခြေလှမ်းများနှင့်သောသူတို့သည်စဉ်းစားကြဘူးတယျ။
9 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 09: 37
9 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 12: 26
အဘယ်သူမျှမတစုံတခုနှင့်အတူမကူညီဘူးငါ့အဘို့, တဦးတည်းအရာ, မြေကြီးလှုပ်ခဲ့သည်, အခြားသောဒီတော့ရိုင်းကသူ့အစိုးရနှင့်သူ၏လူများ၏မိုက်မဲခြင်းဖြစ်၏။
9 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 14: 18
ဒါက chancy မတိုင်မီသေဆုံးရမည်ဖြစ်သည် ..
9 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 10: 00
9 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 12: 25
9 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 14: 16
ဤမျှလောက်စုန်းအောင်ရပ်တန့်ဖို့ yk .. ခွင့်လွှတ်အတှကျဘုရားသခငျကိုမေးမွနျးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့သင် cosas.le တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဘယ်လိုမြင်ရပါလိမ့်မယ် ... ..ese တိုင်းပြည်မကောင်းသောအနှင့်အတူရှိနေသည်နှင့်ယခုဤနေရာတွင်ကျော်ယူဆောင်လာချင် ... ok ... နှင့်ဝက်သားနှင့် Aki ရှိနေကြသည် သမ္မတဟာအီတီလနှင့်အတူ panti ရေကိုပေးတော်မူ၏ ...
10 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 12: 15
ထောင်ပေါင်းများစွာသောတူသောမှတ်ချက်ဒေါသထွက်နေတဲ့မျက်နှာထိုက်သောသူတို့အားမပေးစားပါနဲ့။ ဒါဟာသူတို့ကိုသင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ကြုံတတ်၏။ ***** သူတို့ရဲ့ကြမ်းကြုတ်နှင့်သွေးတတ်ကိုခပ်ရိုင်း
9 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 15: 40
ကျနော်တို့ဒါ Lambone ကျနော်တို့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဟေတီ Verda အတွက်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲထုတ်ကုန်ရောင်းချရစေမယ်ဆိုရင်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုကူညီပေးဖို့ပထမဦးဆုံးခဲ့ကြသည်ပြောကြောင့်ကိုယ်ရံတော်တစ်ဦးအုပ်တစ်အုပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်သူတို့သည်သင်၏ corduroy ကိုကူညီမယ်ဆိုရင်ကြည့်ဖို့ဟေတီရန်သူတို့ကိုပို့ပေးပါ ဒီတိရစ္ဆာန်ဆင်းရဲသားကိုငြိုငြင်စားရန်တီဝယ်သူကိုကြမ်းပြင်ပေါ်မှာအရာခပ်သိမ်းပစ်စရာမလိုဘဲ။
9 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 16: 13
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများဘာမျှဋ ****** ဃဒိုမီနီကန်နှင့်ဒိုမီနီကန် hows အဆိုပါ pittise ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်ဒီအကင်လုပ်ခိုင်းဃဋ UN'd သူတို့ Coca Coca storewide pillaging ခဲ့ကြသည်ဒိုမီနီကန်နှင့်ဒိုမီနီကန်စက်ရုံဃ kemando ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘာမျှမပြောပါပြောတတ်စကားပြောဖို့ pittise ဘာမျှမဒါငါ keria ဃကုလကယုံကြည်ကြဘူးဖြစ်ပျက်အဖြစ်သူတို့ထိုကဲ့သို့သောကမ္ဘာတဝှမ်း sacreditandonodခဲ့ကြသည်
9 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 18: 35
သူတို့ဟာ aca များအတွက်ဖမ်းပြီးအားမိမိတိုင်းပြည်သည့်အပြေး '' အဋဋသိကြ Aki သူတို့ကိုစာတမ်းများနှင့်ချောပေး getdနေကြသည်အလွန်စစ်မှန်တဲ့ .ahorita အားလုံး Aki များမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားသခင့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီ
9 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 19: 04
ဘယ်လိုတိုင်းပြည်, ထိုစိတ်ဓာတ်နှင့်လူမျိုးစုအရေးယူမှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်ခြေလှမ်းရွေ့လျားခြင်းနှင့် 200 ပြန်လဲကြမည်ဖြစ်သည်။ ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံအတိုင်းအတာကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်တာကိုမြင်ခြင်းနှင့်ငါအထောက်အထားမဲ့၏ပြဿနာဖို့အသုံးအာဏာပိုင်များအထူးသရည်ညွှန်းမျက်စိကန်းသောမျက်စိဖြစ်လာ
9 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 21: 38
9 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 22: 43
ဤရွေ့ကားကျွန်တော်တို့ကိုအချင်းချင်းစည်းလုံးညီညွတ်ရေးချင်သောသူဖြစ်ကြ၏။ Sie ကောင်းသောကြည့်ဖို့မက္ကဆီကိုနှင့်အမေရိကန်မှစုစညျး။
9 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 23: 33
ဒိုမီနီကန်သူတို့ကအမေရိကန်မှတပါး USA နဲ့မက္ကစီကိုဟေတီများမှာထင်ပါတယ်။ UU ။ သူတို့က၎င်း၏အိမ်နီးချင်းများကကိုလိုနီခဲ့ဖူးဘူး
10 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 11: 45
အခြားသူများလျှင်ဒါ။ အဘယ်ကြောင့် 1776 ၌တည်၏။ ဒါဟာသူ့လွတ်လပ်ရေးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီမှာ 1844 ၌တည်၏။ ဒါကြောင့်အခြားဘက်ခြမ်းကွန်ဂိုမှဆွဲထုတ်
10 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 12: 39
10 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 15: 01
11 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 02: 53
11 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 16: 22
11 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 16: 26
တိုက်ကြီးတစ်လျှောက်လုံးကြောက်မက်ဘွယ်သောအပြန့်နှံ့ကြသူစပိန်၏ Self-ကွှေးကျွောသားစဉ်မြေးဆက်အရမ်းရယ်ရတယ်ကြောင်းမဟုတ်ရင်သင်တို့အဘို့အပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးရှက်ပုံမှန်စပိန်သေးစိတ်ဓာတ် mulattoes, အဖြစ်ကထည့်သွင်းစဉ်းစားတော့မှ
11 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 16: 42
ဘာမှတီထွင်ဖို့ကြိုးစားနေမဟုတ်, လူတိုင်းအတွက်ဒီမြို့ရဲ့သမိုင်းမှာသိတယ်သူတို့လုပ်ပေးရန်ကြိုးစားအဖြစ်လူဖြူသူတို့ရဲ့မျက်နှာသာလိမ်ခဲ့ကြသော်လည်းယခုတွေ့မြင်ကျနော်တို့လူ့ယဉ်ကျေးမှုကိုတည်ဆောက်ဇစ်မြစ်ဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်ငါသူတို့ဆက်ဆက်ဟေလသလူများမှာဆိုဤအာဖရိကန်ကိုသိရ ဂရိနိုင်ငံအဲဂုတ္တုပြည်အကြားဆက်ဆံရေးကျနော်တို့ဘာမှမဖြစ်ဘယ်တော့မှမယ်လို့ပြောဝံ့။ ငါကလူ Toussaint ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် Wanda ဤမျှလောက်ငါကြိမ်နှင့်လူဖြူရေတွက်လို့မရပါဘူးဧကန်အမှန်အသင်အတူတူပါပဲပြောပြလိမ့်မယ်ပါပြီဒီထားသောစာပိုဒ်တိုများကြားသိ
11 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 16: 52
: 20 စပိန်မတ်လ, 2018 ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်နဲ့Nodwès S ကိုဆုတောင်းဖို့လိုအပျသူတုန့်ပြန်တောင်းပန်ခြင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတ Boyer ဒိုမီနီကန်၏ပေးစာဟေတီကျူးကျော်များနှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာသူ၏သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များထံမှအကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုမှုများအပေါ်ဖေဖော်ဝါရီလ 1822 အတွက်ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံသိမ်းပိုက် Comments ဟိုဆေး Nunez က de Caceres ။ တစ်အကျိုးကျေးဇူးနှင့်ဥပဒေရေးရာခွဲတမ်းကံမကောင်းဒိုမီနီကန်နိုင်ငံရေးအာဏာအမြင့်ဆုံးအထွတ်အထိပ်မှမုန်းတီးမှုနှင့်မထီမဲ့မြင်သို့လှည့်နှင့်အနောက်ပိုင်းစုတစုမြို့သားဖြစ်သောကြောင့်အီခေါငျးဆောငျမြား၏ရှေ့နောက်မညီခြင်းနှင့်သတိမဲ့၏အဆင်းရဲခံရသကဲ့သို့, အဘယျသို့ယနေ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်, သူကပုံမှန်ရည်ရွယ်ပြီးအမိန့်နှင့်အတူအုပ်ချုပ်မှုစနစ်မဆိုစစ်မှန်သောအစီအစဉ်ကိုမပါဘဲအာဏာကိုရောက်လေ၏။
11 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 16: 54
9 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 23: 41
နှောင့်အယှက်များနှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာအမြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့်သူ့ကိုပင်ဘာမှခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်းမရှိဘဲစကားပြောဖို့ကြားနိုင်သည်ငါ့ကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတ Boyer ပါမယ်ကိုလည်းလယ်ပြင်၌မကောင်းတဲ့အစိုးရရှိခဲ့ပါတယ်လျှင်သင်သည်သူတို့မုန်းထက်ပိုရိုင်းစိုင်းတဲ့ပုံပေါ်ကြောင်းထင်စေသည် သငျသညျ, တပြင်လုံးကိုကျွန်းသင်တို့အဘို့လွတ်လပ်သောကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရန်ပြင်သစ်မှပိုက်ဆံတစ်ပေါင်းလဒ်ပေးဆောင်လည်းထိုအ 25 နှစ်ပေါင်း၏သားကောင်များနေသောကျနော်တို့ကဤဆိုးခေါင်းဆောင်များ၏သားကောင်များသူတို့ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်ဆှေးနှေးကွမညျဆက်လက်တည်ရှိပြီးတော့လာမယ့်အချိန်
10 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 11: 49
လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့ပြဿနာရှိသည်။ ၎င်းတို့၏အစိုးရများဟုဆိုကာကျနော်တို့ကဒီမှာဒါကြောင့်ပိုးမွှားထမ်းများလွန်းပြီ aya ဖြေရှင်းရန်။ အဘယ်ကြောင့်အခြားအမည်သင်သည်ထိုသူတို့ add လို့မရပါဘူး။ သားကောင်တွေကိုအားဖြင့်ရိုင်းများမှာ
10 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 14: 38
10 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 14: 42
ငါမပြုမီကဆိုပါတယ်ကြောင့်သာတော်လှန်ရေးချုပ်ထားနှင့်ကျွန်တော်တို့ရန်ပွဲပါစေပြီးတော့, သင်နားလည်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်, အမှုအရာပြောင်းလဲနိုင်သည်နေသည်
9 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 23: 49
10 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 11: 51
သငျသညျဒဏ်ဍာရီစကားပြောပါ။ နှင့်တွန်း။ အဘယ်ကြောင့်သူတို့အနက်ဆုံးသောတွင်းသို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်မြေယာယူကြပြီ။ ထိုကဒီမှာတွန်းချင်တယ်။ ရိုင်းအိပ်မက်။ Aya သူတို့ရဲ့ရိုင်းဖြေရှင်းနိုင်။ ဤနေရာတွင်နှင့်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အများကြီးကုန်ကျမမူသောအရာကိုမဖျက်ဆီးကြဘူးကြောင်းစည်းကမ်း
10 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 14: 49
သငျသညျအဘယျသို့တစ်လူမျိုးရေးခွဲခြားဂိုဏ်းအဖြစ်ကိုစဉ်းစားနိုင်အောင်အများကြီးခံစားခဲ့ကြရသည်သူတစ်ဦးကလူပြုမူဆက်ဆံဝံ့နှင့်နေဆဲယနေ့ရိုင်းခံစားနေရသလဲ? Aimé cesaires ၏စာအုပ်များကိုဖတ်သွားပါ, ပြီးရင်ကျွန်တော်အကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်ငါသာသည်ခြင်္သေ့၏စိတ်နှလုံး၌ဤမြို့၏သမိုင်းတစ်ဦးခြေဆွံ့တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုသိလို့ပြောပါလိမ့်မယ်
10 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 00: 17
အများဆုံးတောက်ပစစ်ရေး geniuses ၏နပိုလီယံ Bonaparte.unos Europa.le တီးဝိုင်းဟေတီစွန့်ခွာခြင်းနှင့်လွတ်လပ်သောဖြစ်ပေး၏နှင့်သင်က၎င်း၏တည်ထောင်ကတည်းကအီကလူသူဘယ်လောက်ခက်ခဲများနှင့်မင်းမဲ့စရိုက်တွေ့နိုင်ပါသည်သည့်အခါမင်းတို့သည်
10 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 01: 44
ဒါက candela စိတ်ဆင်းရဲလူတွေနည်းနည်းသူတို့ခဲ့သောအရာကိုထဲက run ဖို့ရှိပါတယ်ပေးဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ အီကိုသမ္မတဆုတ်ခွာအစီအမံဆန္ဒပြပွဲများစတင်ထိုနေ့ရက်တွင်ရေနံတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့ခိုးယူ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လူတွေကိုသတ်ဖြတ်ကြနည်းနည်းအဘယ်အရာကို looting ဆက်လက်လိုက်နာကြပါဘူး။
10 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 02: 33
သူတို့ကျနော်တို့ qui လိမ့်မည်ဟုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်တိုင်းပြည်အတွက်မှားလျှင်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ Soldo ဈစကားမပြောနိုင်သောဘာမှမဟုတ် dises siego တစ်ဦးသမ္မတအဖြစ်ရှိ
10 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 02: 30
သို့သော်ယခုဤတိုင်းပြည်များအတွက်ပြဿနာရဲ့သူတို့ဟေတီအလျှင်းမရှိဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံများအတွက်ပြဿနာကြောင်းနှစ်ဦးစလုံးကိုယ့်မျက်စိရိုက်ထည့်ပါကနည်းနည်းအဆုံးသတ်အဖြစ် yegaran Haitien နှာခေါင်း como mamey တနင်္ဂနွေနှစ်ဦးစလုံးတို့ကိုရှောက်သွားသောကွောငျ့ဖွစျသညျ Inose pasavan အုပ်စုခဲ့သည် ထိုသူအပေါင်းတို့သည်တိုင်းပြည်ရဖို့လိုခငျြသောကွောငျ့ disque ကျွန်တော်ဘောင်းဘီဝတ်ဖို့ရှိသည်သမ္မတခဲ့
10 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 09: 12
သင်သည်သူတို့ဖြေရှင်းချက်တွေဟာနေရာတိုင်းမှာသာဥပဒ်ကိုရောက်စေသောသူတို့အား Savage ထိန်းချုပ်ရှိသည်နိုင်လျှင်တစ်ဦးတည်းသာအဖြေတစ်ခုရှာနိုင်ငံတော်သမ္မတမက်ဒီနာမှပေးပို့
10 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 15: 11
ဒါဟာဟာအီတီကလူထုတ်ဖော်ပြောဆိုဘယ်လိုကြည့်ဖို့ deplorable ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ carestia ကြားမှဘဝတစ်လမ်းအဖြစ်ပြစ်မှုမကျူးလွန်သောလူ, ဆန့်ကျင်လုပ်ကိုင်ဖို့ရှာကြံ, ဆင်းရဲသောအုပ်ချုပ်မှုနှင့်စီးပွားရေးအစီအမံများမှားယွင်းနေဤမျှလောက်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ပင်ပန်းပြသရန်ဟာအီတီကလူကိုဦးဆောင်ကြပါပြီ နှင့်စီးပွားရေးမှားယွင်းမှု။ demustran သောလူမျိုးရေးခွဲခြားသဘောထားကိုပေးထားငါကသူတို့ကိုအမေရိကန်ဗီဇာပေးဒါမှမဟုတ်သူတို့ကသူတို့ကိုအကြှနျုပျကိုပေးစေခြင်းငှါအရကြိုးစားရန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလည်ပတ်ခဲ့ကြလျှင်တစ်ခုသာလူနည်းစုတိုင်းပြည်ထွက်ခွာနိုင်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြောင်းဒိုမီနီကန်အဖြစ်သင်တို့အဘို့ဘယ်လောက်လွယ်ကူသောတွေးမိ နှင့်ခရီးသွားအများအပြားအရမ်းအများကြီးသံသယသောပုံ, ခမ်းနားထည်ဝါတွင်နေထိုင်ကြောင်းဤကဲ့သို့သောလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနှင့်အတူထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်
12 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 05: 51
10 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 16: 07
သူတို့ကကျနော်တို့ကဒီပြပွဲနှင့်အတူတီ get Kieren ကောင်းမကောင်းစေ့စေ့နားထောင်estémonosမှာဤကိစ္စကိုကြည့်နှင့်အတူ knapsack အထဲမှာကြောင်တစ်ကောင်ရှိတယ်
10 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 16: 22
10 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 16: 23
10 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 16: 25
"သူများသည်။ သူတို့ဟာအဲဒီဖြစ်ကြသည်။ အဲဒီမှာ။ ဆိုလိုသည်မှာ။ , မသန်စွမ်းပေးပို့ပါ။ ဟေတီ ,. ((2)), သစ္စာဖောက် ",! ။
10 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 16: 50
ဒါက ur ပိုင်နက်မှတီ၏ ls masivs entry ကိုအတူ invadirno အပြီးသတ်ဖို့ screen ကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ
10 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 18: 01
ယူနိုက်တက်လူအမျိုးမျိုး Republica ဒိုမီနီမဟုတ်တစ်ဦးတည်းလုပ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟေတီကကူညီ k ရှိတယ် !!
11 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 17: 50
ဒါကအတင်းအဓမ္မတောင်ပံဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံတစ်ဦးသေသတ်ခြင်းငှါမရချင်သောလူတစ်ဦးက q ဖြစ်ပါတယ်လိုချင်တာတွေက q ဖြစ်ပါသည်
11 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 21: 16
ဒါကတိုင်းပြည် Maspa ၏ဋ desapase ရှိ #####
11 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 21: 42
11 မှ 2018 ဇူလိုင်လ 21: 43
“El tirano Nicolás Maduro, que vulneró la legalidad, apelaala misma cuando le conviene y se ve vencido, mientras el ex-presidente español José Luis Rodríguez Zapatero le sigue apoyando” 19 ဖေဖော်ဝါရီလ 2019
Haití “arde” y los políticos siguen dormidos en sus madrigueras sin salida, convertidas en reinos de nula lealtad con el pueblo 18 ဖေဖော်ဝါရီလ 2019
Nicolas Maduro “Matas” y no Moros, pero sí Venezolanos. Algún día un Altísimo Tribunal le juzgará 16 ဖေဖော်ဝါရီလ 2019
Una imagen en Haití que debe desaparecer de la visión mundial sin más dilación que exige la razón, impuesta por la paz y una democracia dañada por el error 16 ဖေဖော်ဝါရီလ 2019
Haití existe, vive y vivirá en libertad, democracia y progreso socialapesar de sus desencuentros internos 15 ဖေဖော်ဝါရီလ 2019
Maduro, cuanto más tarde en desaparecer de la imagen venezolana.. más dura será su caída y la de los esbirros que le apoyan9ဖေဖော်ဝါရီလ 2019
Maduro está tardando demasiado en caer en el amado suelo venezolano7ဖေဖော်ဝါရီလ 2019
စပိန်: တည်ငြိမ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေး Andalusia ၏ရေဘဏ်များအပေါ် prompt ကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု "155 Cavalry" လိုအပ်သည့်အခါ
13 ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 3
ဒီartículoTweet 27.000.000 €နှစ်စဉ်ဘတ်ဂျက်ထက်ဖြစ်ကောင်းပိုပြီးမျှဝေပါ, စပိန်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအဘို့အများကြီးအရေးပါမှုရှိလစာပေးဆောင်ဖို့စီစဉ်ထားနှင့်လူမှုရေးလုံခြုံမှုကိုစောင့်အရှောက် 495 စေပါဘူး [ ... ]
Rothschild ရဲ့လောက၏အကွယ်အကာအတွက်ကမ္ဘာသစ်နိုင်ရန်အတွက်ကြီးမြတ်အဖြူမျှော်လင့်ချက်သည်ယခုအခါတွင်လည်းဘဏ်လုပ်ငန်း၏ "အဝါရောင်" ရေးစပ်ဒီartículoTweetLa Share, ဤလောကသို့ဘာသာပြန်ထားသောအရာ "Concordia, Integritas, စက်မှု" ဟုဆို [ ... ]